उचाइ नाप्न सर्वोच्च शिखर टेकेको क्षण
हावाको भोक कति गहिरो र कति चाँडै लाग्छ भन्ने कुराको महसूस गर्न हिमाल चढ्नुपर्ने रहेछ। मलाई हावाको भोक कति गहिरो हुन्छ भन्ने कुरा सगरमाथाले बुझायो। अक्सिजन हावा हो। उचाइमा हावा धेरै लाग्छ। सबै हावा अक्सिजन होइनन्।
देशको समृद्धिका लागि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमध्ये कुनै एउटाको नेतृत्वमा अर्थतन्त्रको गन्तव्य तय गरिनुपर्छ।
स्थानीय सरकारले गर्न बाँकी काम
स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा केही कमजोरीका बीच विभिन्न राम्रा प्रयास देखिए। तर, योभन्दा पनि धेरै काम गर्न सकिने सम्भावना प्रशस्त छन्।
देशभित्रै अनागरिक एकातिर नागरिकता सम्बन्धी संविधानको व्यवस्था विभेदकारी भएको आरोप लागिरहेको छ, अर्कोतिर त्यस अनुसार ऐन नबन्दा र सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा देशभित्रै अनागरिक बन्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ।
प्राणी र पृथ्वीबारे चिन्तन गर्दागर्दै बिदा भएका दुई हस्ती जैविक विविधता शब्दावलीका प्रणेता जीव वैज्ञानिकद्वय एडवार्ड ओ. विल्सन र थोमस ई. लभ्जोयले जीव विज्ञानमा विशिष्ट योगदान गर्दै पृथ्वीमा निम्तिरहेको सङ्कटबारे खबरदारी गरिरहे।
रञ्जित रेको पुस्तकको तरङ्ग जबसम्म हाम्रो नेतृत्व ओत लाग्न दिल्ली वा बेइजिङ वा बाशिङ्टन चहारी राख्छन्, तबसम्म विशेष उद्देश्य, विशेष कारण र विशेष समयमा रञ्जित रेका जस्ता पुस्तक आइरहेछन्।
माओवादीको समानुपातिक प्रणाली मदारीको डमरु राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैमा एक तिहाइ महिला सांसदको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिमको प्रतिनिधित्व पनि पहिलाको भन्दा राम्रो छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा हामी एक कदम अगाडि बढेका छौं।
किन बढ्दै छन् परिवारसँग जोडिएका अपराध? सहनशील मानिएको नेपाली समाजमा पछिल्लो केही वर्षयता भने परिवारसँगै सम्बन्धित अपराधका घटना बढ्दै गएको देखिएको छ।
पितौंजी : नेपालमा न्वारन भएको २०० वर्षपछि भारतमा विवादास्पद डेनिस वनस्पतिविद् नाथानियल वालिचले दुई सय वर्ष अघि नेपाल भ्रमणका क्रममा नामकरण गरेको पितौंजी अर्थात पुत्रन्जिभा राक्सबर्गिई वनस्पतिलाई योगगुरु रामदेवको कम्पनीले ‘पुत्रजीवक’ बनाएपछि विवादास्पद बनेको छ।
जग्गा प्लटिङ प्रकरण : माडी नगरपालिकालाई अख्तियारको पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा प्लटिङ तथा जथाभावी कित्ताकाट गरेको प्रकरणमा चितवनको माडी नगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ।
कोभिडले चिनाएको सत्य अहिलेको महाव्याधिबाट प्रभावित धेरैको अनुभव र बुझाइमा कोभिड भनेको दुःख, वेदना र वियोगको पर्याय हो। तर, मेरो अनुभव केही फरक रह्यो।
तेञ्जिङ-हिलारीले काठमाडौं टेकेको त्यो दिन!
त्यस घडीको एउटा अविस्मरणीय सम्झना बग्गीका अघि-अघि चार वटा घोडामा सवार भएका काठमाडौंका चार युवती थिए- इन्दिरा श्रेष्ठ, शान्ता श्रेष्ठ, कोकिला देवी र प्रभा श्रेष्ठ। बग्गीको अगुवाई गर्ने यी चार घोडसवार युवतीको चर्चा काठमाडौंमा धेरै समयसम्म छाएको थियो। सगरमाथाको त्यो विजय नेपालीहरूका लागि संसारै जितेको भन्दा ठूलो थियो।
जलथलमा कसरी जोगाउने दुर्लभ वन सुपारी रामगुवा?
वन सुपारी नै भनिए पनि क्यारीओटा उरेन्स र झापाको जलथलमा पाइएको हर्सफिल्डिया किंगी अर्थात् रामगुवाको साइनो नजिकको पनि छैन। यी दुई प्रजाति धान र अम्बा जति नै फरक छन्।